ट्रेड युनियनको काठमाडौंमा देवी भुसाल, हेर्नुहोस को को भए निर्वाचित ? – Gorkha Sansar
ट्रेड युनियनको काठमाडौंमा देवी भुसाल, हेर्नुहोस को को भए निर्वाचित ?
गोर्खा संसार २०७४, ३० चैत्र शुक्रबार १३:५६
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको काठमाडौंको चुनावमा देवी प्रसाद भुसाल निर्वाचित भएका छन्। भुसालले अर्का प्रत्यासी भगवती फुयाँललाई पराजित गरेका हुन्। भुसालले ८२४ मत ल्याउँदा फुयाँलले ८०६ मत ल्याइन।
दुई पक्ष भएर चुनावी मैदानमा गएका उनीहरुबीच कडा प्रतिष्पर्धा भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा भुसाल समुहलाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला लगायतका नेताहरुको समर्थन थियो। भगवती समुहलाई भने पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा तथा निकटहरुको समर्थन रहेको थियो। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसमा काठमाडौं शाखा सबैभन्दा ठूलो शाखा हो। यसले ट्रेड युनियनको केन्द्रीय राजनीतिमा पनि प्रभाव राख्दछ।
कार्यसमितिको खुल्ला उपाध्यक्षमा इश्वर प्रसाद घिमिरे ७७७ मत ल्याइ निर्वाचित हुँदा सविन कुमार पन्तले ७४७ मत ल्याएका छन्। घिमिरे फुयाँल समुहका हुन्।
उपाध्यक्ष महिलामा पनि फुँयाल समुहकै तारादेवी केसीले ८२८ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा माया नेपालीले ७१३ मत ल्याइन। उपाध्यक्ष सेवा क्षेत्रबाट धन प्रसाद पौडेलले ७८४ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा सजिव श्रेष्ठले ७२१ मत ल्याए। पौडेल पनि फुयाँल समुहकै हुन्। उपाध्यक्ष उत्पादनबाट दिनेश थापा ७७० मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा उदय बहादुर लामाले ७११ मत मात्र ल्याए। उपाध्यक्ष अनौपचारिक क्षेत्रबाट ७८७ मत ल्याएर योगेश केसी निर्वाचित हुँदा राम बहादुर भण्डारीले ७१९ मत ल्याए। केसी भने भुसाल समुहका प्रत्यासी हुन्। ५ उपाध्यक्षमा ४ फुँयाल समहुबाट निर्वाचित हुँदा १ जना भुसाल समुहबाट निर्वाचित भएका हुन्।
सचिवमा भुसाल समुहका विष्णु प्रसाद कोइराला निर्वाचित भएका छन्। सहसचिवमा भुसाल समुहबाट प्रल्हाद फुयाँल र फुयाँल समुहबाट राजनकुमार कार्की निर्वाचित भए। कोषाध्यक्षमा र सहकोषाध्यक्षमा भुसाल समुहबाट विमल प्रसाद तिमिल्सिना र मनिका तामाङ निर्वाचित भए।
सदस्य खुल्लामा उत्तम पौडेल, गणेश प्रसाद धिताल, गिरिराज अर्याल, धर्मसागर ढकाल फुँयाल समुहबाट निर्वाचित हुँदा भुसाल समुहबाट प्रभुदास न्यौपाने मात्र निर्वाचित भए। महिला सदस्यमा भने निरमाया तिमिल्सिना र यान्जुदेवी दाहाल भुसाल समुहबाट र गिता भट्टराई र सृजना अर्याल फुयाँल समुहबाट निर्वाचित भए।
निर्वाचनबाट भुसाल समुहका पदाधिकारीमा वहसमत भएपनि कार्यसमितिमा भने फुयाँल समुहको वहुमत आएको छ।
२०७७, २७ पुष सोमबार २२:३८
२०७४, १९ चैत्र सोमबार १५:५०
अधिनायकवाद शुरु भइसक्योःसभापति देउवा
२०७५, ३ बैशाख सोमबार १३:५६
देउवामाथि यसरी खनिए शशांकदेखि गगन थापासम्म
२०७५, ८ बैशाख शनिबार १६:३७